သငျ့အ သကျဘယျလောကျလဲ? ဘာနမှေ့ေးလဲ? သာမှနျ မှနျပွောပါ – XB Media Myanmar
သငျ့အသကျဘယျလောကျလဲ? ဘာနမှေ့ေးလဲ?သာမှနျမှနျပွောပါ မှနျလှနျးလို့ ထပျခါ ထပျခါ ဖတျဖွဈတဲ့ ….ဇနကဟောကိနျး
ဘုရားအလောငျးတျော မဟာဇနကမငျး၏ ဖွဈစဉျခုနှဈမြိုး အခွပွေု၍ ရှေးဆရာကွီးမြားက တီထှငျ၍ တှကျကိနျးဆငျထားခွငျးဖွဈသညျ။ အလှနျလှယျကူရှငျးလငျး၍ ယနပေ့ညာရှငျမြားထိ သုံးစှဲနသေော တှကျကိနျးဖွဈပါသညျ။ တှကျကိနျးအား ပုံသကေားခမြယူပဲ မဟာဘုတျ စ သော အခွားတှကျကိနျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးဟောပွောလြှငျ အလှနျအစှမျးထကျသော ဟောကိနျးဖွဈသညျ။
ဥပမာ – မိမိက တနင်ျဂနှသေားသမီး အခုရောကျသကျ ၂၅ နှဈဆိုရငျ တနင်ျဂနှေ ဇယားကှကျထဲတှငျ ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နနျး * အကှကျထဲတှ ငျရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတျပါ။ မိမိက တနင်ျလာသားသမီး အခုရောကျသကျ ၂၀နှဈဆိုရငျ တနလာင်ျဇယားကှကျထဲတှငျ ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပကျြ* အကှကျထဲတှငျရှိသောကွောငျ့ ထိုအဟောကိုဖတျပါ။
တညျဆိုတာ သင်ျဘော တညျဆောကျတာကို ပွောတာပါ။ လုပျငနျးတှအေတှကျ ကွံစညျဆဲ၊ လုပျငနျးတှအေစပွုဆဲ အခွအေနကေို ရောကျ နတေယျလို့ ပွောတာပါ။ လုပျငနျးအတှကျ ရငျးနှီးမွုပျနှံဖို့ ရနျရှာရာတှငျလှယျကူလိမျ့မညျ။ လုပျငနျးအကွံအစညျအောငျမွငျမညျ။ အလုပျရှာ နလြှေငျ အလုပျရမညျ။ အလုပျလြှောကျထားလြှငျ အလုပျရမညျ။ အမှုကိစ်စတှေ၊ အလုပျတှမြေားမညျ။ ငှဝေငျမြားသလို ငှထှေကျလဲမြားမညျ။
ထှကျဆိုတာ ဇမ်ဗနဂိုရျပွညျက သင်ျဘောစထှကျတာကိုပွောတာပါ။ ကောငျးမှနျသောမိတျဆှသေဈမြား တိုးမညျ။ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြား လုပျရမညျ့အခြိနျကောငျးပါ။ ပွညျတှငျး၊ပွညျပခရီးမြား သှားရမညျ။ နိုငျငံခွားကုနျလုပျငနျးမြား အောငျမွငျမညျ။
ပကျြဆိုတာ သင်ျဘော ပကျြသှားတာကို ပွောတာပါ။ ကံဇာတာညံ့ခြိနျပါ။ စီးပှားရေးကဆြငျးမယျ။ သူမြားမကောငျးကွံခံရတတျသညျ။ မ တျော တဆထိခိုကျမှု အသေးအဖှဲမြား ကွုံတတျသလို သကေောငျပေါငျးလဲဝဒေနာမြား ဖွဈတတျသညျ။ ရာထူးလုပျငနျးကိုနှောငျ့ယှကျမညျ့သူ ပျေါ လာ လိမျ့မညျ။ အိမျထောငျရေးကို အထူးသတိထားပါ။
ကြောကျဆိုတာ မခေလာနတျသမီးက ကြောကျဖြာထကျမှာတငျပေးထားတဲ့ ကိနျးဆိုကျပွီဆိုတော့ ကံကောငျးပွီလို့မှတျပါ။ မမြှျောလငျ့ပဲ ကူညီ မယျ့သူတှပေျေါမယျ။ အောငျပါလသေိနျးထီဆုကွီးမြား ပေါကျမယျ။ မကနျြးမမာဖွဈနရေငျတော့ ပွနျပွီးကနျြးမာလာမယျ။ ဆရာကောငျးနဲ့ တှေ့ ပွီ လို့ ဟောပါ။ အမှုရှိရငျရှိနိုငျမညျ။ အခြုပျနှောငျခံနရေရငျ လှတျမညျ။ ကဆြငျးနသေောစီးပှားရေးမြား ပွနျတကျလာမညျ။ ပညာရေး လဲ ကောငျးမညျ။ အိမျထောငျကလြှငျ အိမျထောငျဖကျကောငျးနှငျ့တှပွေီ့လို့ဟောပါ။ အကွံအစညျမြား အောငျမွငျမညျ။
ထီးဆိုတာ ထီးဖွူဆောငျးတဲ့ကိနျးပါ။ နာမညျကြျောကွားထငျရှားမညျ။ ကောငျးသတငျးနှငျ့ ကြျောကွားခွငျးပါ။ ဆုလာဘျတှရေမညျ။ ဘှဲ့ထူး ဂုဏျထူးမြား ရမညျ။ စာမေးပှဲဖွထေားရငျ စာမေးပှဲအောငျမညျ။ ရာထူးတိုးမညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား တိုးခြဲ့ရမညျ။ အိမျသဈဆောကျကိနျး၊ အိမျသဈရကိနျးပျေါမညျ။
နနျးဆိုတာ နနျးအပျခံရတဲ့ကိနျးပါ။ ကံဇာတာကောငျးပွီလို့ဟောပါ။ ရာထူးတိုးမညျ။ စီးပှားဖွဈထှနျးမညျ။ အမှအေနှဈတှရေမညျ။ အပွိုငျအ ဆိုငျတှမှော အနိုငျရမညျ။ ရှေးကောကျပှဲတှမှော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရငျနိုငျမညျ။ အိမျထောငျကကြိနျးရှိသညျ။ အိမျထောငျကလြှငျလဲ ကံ ကောငျးမညျ။ အလှူပွုလုပျရမညျ။ မငျးစိုးရာဇာ အကွီးအကဲဖွဈမညျ။
စံဆိုတာ မငျးစညျးစိမျကိုခံယူရတဲ့ကိနျးပါ။ ဘေးအန်တာရာယျကငျးပွီး စုတျကွီး၊လာဘျကွီးတှဝေငျမညျ။ လုပျငနျးတှတေိုးတကျမညျ။ ကွီးမားတဲ့ ရာ ထူးတှရေမညျ။သိုလှောငျပစ်စညျးတှကေ အကြိုးအမွတျရမညျ။ အခွှအေရံမိတျဆှအေပေါငျးအသငျး တိုးမညျ။ ငှကွေေးစုဆောငျးမိမညျ။ ယခု အ ဟောတမြိုးထဲနှငျ့ ပုံသယေူ၍မရပါ။ မသိသေးသူမြား သိစရေနျ ရညျရှယျ၍ ကူးယူရေးသားပါသညျ။
Credit to written by ဗဒေငျ လက်ခဏာ
သင့်အသက်ဘယ်လောက်လဲ? ဘာနေ့မွေးလဲ?သာမှန်မှန်ပြောပါ မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ….ဇနကဟောကိန်း
ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ် စ သော အခြားတွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်ေ သာ ဟောကိန်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၅ နှစ်ဆိုရင် တနင်္ဂနွေ ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နန်း * အကွက်ထဲတွ င်ရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ မိမိက တနင်္လာသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၀နှစ်ဆိုရင် တနလာင်္ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပျက်* အကွက်ထဲတွင်ရှိသောကြောင့် ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။
တည်ဆိုတာ သင်္ဘော တည်ဆောက်တာကို ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကြံစည်ဆဲ၊ လုပ်ငန်းတွေအစပြုဆဲ အခြေ အနေကို ရောက် နေတယ်လို့ ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ရန်ရှာရာတွင်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်း အ ကြံအစည်အောင်မြင်မည်။ အလုပ်ရှာ နေလျှင် အလုပ်ရမည်။ အလုပ်လျှောက်ထားလျှင် အလုပ်ရမည်။ အမှုကိစ္စတွေ၊ အ လု ပ်တွေများမည်။ ငွေဝင်များသလို ငွေထွက်လဲများမည်။
ထွက်ဆိုတာ ဇမ္ဗနဂိုရ်ပြည်က သင်္ဘောစထွက်တာကိုပြောတာပါ။ ကောင်းမွန်သောမိတ်ဆွေသစ်များ တိုးမည်။ စပ်တူ ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ရမည့်အချိန်ကောင်းပါ။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးများ သွားရမည်။ နိုင်ငံခြားကုန်လုပ်ငန်းများ အောင်ြ မင်မည်။
ပျက်ဆိုတာ သင်္ဘော ပျက်သွားတာကို ပြောတာပါ။ ကံဇာတာညံ့ချိန်ပါ။ စီးပွားရေးကျဆင်းမယ်။ သူများမကောင်းကြံခံရ တ တ်သည်။ မ တော် တဆထိခိုက်မှု အသေးအဖွဲများ ကြုံတတ်သလို သေကောင်ပေါင်းလဲဝေဒနာများ ဖြစ်တတ်သည်။ ရာထူး ပ်ငန်းကိုနှောင့်ယှက်မည့်သူ ပေါ် လာ လိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးကို အထူးသတိထားပါ။
ကျောက်ဆိုတာ မေခလာနတ်သမီးက ကျောက်ဖျာထက်မှာတင်ပေးထားတဲ့ ကိန်းဆိုက်ပြီဆိုတော့ ကံကောင်းပြီလို့မှတ်ပါ။ မေ မျှာ်လင့်ပဲ ကူညီ မယ့်သူတွေပေါ်မယ်။ အောင်ပါလေသိန်းထီဆုကြီးများ ပေါက်မယ်။ မကျန်းမမာဖြစ်နေရင်တော့ ပြ န်ပြီးကျန်းမာလာမယ်။ ဆရာကောင်းနဲ့ တွေ့ ပြီ လို့ ဟောပါ။ အမှုရှိရင်ရှိနိုင်မည်။ အချုပ်နှောင်ခံနေရရင် လွတ် မည်။ ကျဆင်းနေသောစီးပွားရေးများ ပြန်တက်လာမည်။ ပညာရေး လဲ ကောင်းမည်။ အိမ်ထောင်ကျလျှင် အိမ်ထောင် ဖက်ကောင်းနှင့်တွေ့ပြီလို့ဟောပါ။ အကြံအစည်များ အောင်မြင်မည်။
ထီးဆိုတာ ထီးဖြူဆောင်းတဲ့ကိန်းပါ။ နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားမည်။ ကောင်းသတင်းနှင့် ကျော်ကြာြး ခ င်းပါ။ ဆုလာဘ်တွေရမည်။ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးများ ရမည်။ စာမေးပွဲဖြေထားရင် စာမေးပွဲအောင်မည်။ ရာထူးတိုးမည်။ စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ရမည်။ အိမ်သစ်ဆောက်ကိန်း၊ အိမ်သစ်ရကိန်းပေါ်မည်။
နန်းဆိုတာ နန်းအပ်ခံရတဲ့ကိန်းပါ။ ကံဇာတာကောင်းပြီလို့ဟောပါ။ ရာထူးတိုးမည်။ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမည်။ အမွေ အနှ စ်ေ ရမည်။ အပြိုင်အ ဆိုင်တွေမှာ အနိုင်ရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်နိုင်မည်။ အိမ်ေ ထာင်ကျကိန်းရှိသည်။ အိမ်ထောင်ကျလျှင်လဲ ကံ ကောင်းမည်။ အလှူပြုလုပ်ရမည်။ မင်းစိုးရာဇာ အကြီးအကဲဖြစ်မည်။
စံဆိုတာ မင်းစည်းစိမ်ကိုခံယူရတဲ့ကိန်းပါ။ ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းပြီး စုတ်ကြီး၊လာဘ်ကြီးတွေဝင်မည်။ လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်မည်။ ကြီးမားတဲ့ ရာ ထူးတွေရမည်။သိုလှောင်ပစ္စည်းတွေက အကျိုးအမြတ်ရမည်။ အခြွေအရံမိတ်ဆွေအေ ပါင်းအသင်း တိုးမည်။ ငွေကြေးစုဆောင်းမိမည်။ ယခု အ ဟောတမျိုးထဲနှင့် ပုံသေယူ၍မရပါ။ မသိသေးသူများ သိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကူးယူရေးသားပါသည်။
လူမှုကှနျယကျပျေါတှငျ အနုပညာရှငျတှအေဖမျး ခံရ အောငျ သတငျးပေးနတေဲ့ဒလနျလို့ စှပျစှဲနကွေ တဲ့အ ပျေါ ပွနျလညျဖွရှေငျးလိုကျတဲ့ နနျးခငျဇယြော